Niato ny sidina mankany Namibia amin'ny Qatar Airways, ny fiaramanidina Ethiopian Airlines ary Lufthansa
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Niato ny sidina mankany Namibia amin'ny Qatar Airways, ny fiaramanidina Ethiopian Airlines ary Lufthansa
I Alemaina dia be mpampiasa any Namibia ary ny fianakaviana sy ny fizahan-tany eo anelanelan'ny Alemana sy Namibia dia mpamatsy vola lehibe ho an'ny firenena afrikanina.
Namibia dia nanana tranga roa voalohany tamin'ny Coronavirus omaly ary nihetsika avy hatrany ny governemanta nanakana ny Qatar Airways, Ethiopian Airlines ary Lufthansa tsy hisidina mankany Namibia. Izany dia hamongorana an'i Namibia amin'ny tsenan'ny loharanom-pizahan-tany manerantany.
Ny governemanta Namibiana dia mampiato ny fitsangatsanganana anatiny sy ivelany mankany sy avy any Qatar, Etiopia, ary Allemana amin'ny lalan-kalehany:
avy any Doha, Addis Ababa, Frankfurt, manelingelina amin'ny fomba mahomby ny fizahan-tany amin'ny tsenan'ny loharano lehibe.
Mandritra izany fotoana izany dia tapaka ny fankalazana ny Fahaleovantena izay nokasaina hiditra ao amin'ny kianjan'ny Fahaleovantena. Na izany aza, hatao ao amin'ny tranom-panjakana ny fianianana.
The Boar ny fizahantany afrikaninad atolotra ho Firenena afrikanina hanaraka ny fomba Nepal, fanelingelenana ny dia an-habakabaka dia hahatratra an'izany ankolaka.
Namibia, firenena any atsimo andrefan'i Afrika, dia mampiavaka an'i Desert Namib manamorona ny morontsiraky ny Atlantika. Ny firenena dia fonenan'ny bibidia isan-karazany, ao anatin'izany ny mponina cheetah manan-danja. Ny renivohitra, Windhoek, sy ny tanàna amoron-tsiraka Swakopmund dia misy tranom-panjanahana alemanina toa an'i Windhoek's Christuskirche, namboarina tamin'ny taona 1907. Any avaratra, ny valan-tsinin'i Etosha National Park dia mitarika lalao ao anatin'izany ny rhino sy zirafy.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fizahantany Namibia: http://www.namibiatourism.com.na/
Miato ny diany any UK sy Irlandy i Etazonia
Ny MGM Resorts manakatona ny Empire City Casino New York